xrdesktop: shandura keyboard yako ive chaiyo chaiyo nzvimbo | Linux Vakapindwa muropa
wemusi Izvo zvinokutendera iwe kushandura desktop yako ive chaiyo chaiyo nzvimbo yekutenda kune iyo yekuvandudza iyo Collabora yaunza. Iyo yemahara uye yakavhurwa sosi purojekiti inoenderana neLinux uye kuunza nzvimbo yeVR, ikozvino ichatendera kuisa windows pamusoro peumwe neumwe, kuve neayo chaiyo keyboard, nezvimwe.
Iyo projeki inoshamisa inovimbisa uye mune akawanda mabasa akaiswa mukati kugadzirisa mikana yeiyo chaiyo chaiyo pane iyo GNU / Linux desktop. Pakave paine kunyange nemipiro kubva kuvanhu vakapinda muchirongwa chexrdesktop kubva kuGoogle Zhizha reKodhi (GSoC) ine mhedzisiro dzakasiyana.
Iko kukuru kuvandudzwa kwe xrdesktop ndiko yako nyowani chaiyo chaiyo keyboard. Sezvo OpenXR, iyo API iyo yakavakirwa, isingaratidzi kuiswa kwemavara, vagadziri vayo vaifanira kushandisa yavo yega system. Aive musimudziri aishandisa ino sisitimu nerutsigiro rwemojis, iine mitauro makumi mashanu nenomwe, nezvimwe. Izvo zvakare zvaidawo kuwedzera Unicode rutsigiro kuraibhurari yeLibInputSynth. Iye zvino zvinoita zvakare kuchinja zvese dhizaini yekhibhodi kuichinjisa kune izvo zvaunoda.
Asi handizvo zvega zvitsva zvave kupihwa. Rimwe basa rakabvumidzawo kuwedzera kurodha uye kupa kwe GLTF mhando izvo zvinonzi nevakagadziri vayo zvinobvumidza xrdesktop kushandisa zviwanikwa senge chaiwo chaiwo mamodheru emamodeli uye nharaunda dze3D.
Mimwe mipiro inoshamisa iyo ichave isiri yekupedzisira, kure nazvo. Iko kuvandudzwa kwe xrdesktop kunoenderera kusingadzorwe, uye zvakawanda zvasara kuti zvionekwe. Iyo yakawedzera chokwadi, chaicho chokwadi, uye chokwadi chakakanyiwa ndiro ramangwana, uye Linux haigone kubvumidzwa kurambwa ramangwana rakadai. Mirairo yakaita seiyi kubva kuCollabora, pakati pevamwe, iri kutora matanho akakosha kuti VR isvike, zvese zororo uye zvimwe zvekushandisa.
Rumwe ruzivo nezve xrdesktop chirongwa - GitLab Yepamutemo Saiti
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Multimedia » xrdesktop: shandura keyboard yako ive chaiyo chaiyo nzvimbo
Kupona Mars: Pazasi uye Kupfuura Yakaburitswa Nezvakawanda Zve Nyowani Zvemukati
Yakazara Hondo: WARHAMMER III: yakanonoka kusvika 2022